Fanaraha-maso ny fandraisana anjara | Reef Resilience
Ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina dia mitarika ny fanaraha-maso ny hetsika isam-bolana any Maunalua Bay Sary © TNC
Ny fandaharanasa fanaraha-maso dia mampiasa mpahay siansa, mpikaroka na mpanara-maso amin'ny fomba mahazatra ary mety ho enti-manentana. Noho izany, ny fandaharam-potoana fanaraha-maso dia matetika tsy afaka manome fampahalalana amin'ny antsipiriany amin'ny maotera malalaka sy ara-nofo. Amin'ny fametrahana fandaharam-panaraha-maso eo amin'ny fandraisana anjara, dia afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa avy amin'ny tranonkala maro kokoa ny mpitantana.
Ny fandaharam-potoana fanaraha-maso ny fandraisana anjara dia manara-maso ireo mpijery tsy manam-pahaizana - indraindray antsoina hoe 'siantifika olom-pirenena' - amin'ny fanaraha-maso ny asa. Ireo hetsika fanaraha-maso ireo dia mety ho tarihan'ny mpahay siansa na mpitantana na manara-maso ny vatohara tsy miankina. Ireo manampahefana mpitrandraka haran-dranomasina matetika dia mampiasa programa fanaraha-maso ny fanaraha-maso mba hanombanana ny fari-pahasalamana, ny fanandramana manelingelina, ny fanombanana ny vokatra manaraka ny korontana, ary ny fanombanana ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana.
Tombontsoa amin'ny fanaraha-maso ny fandraisana anjara
Nahazo tombontsoa lehibe ny mpandraharaha nandray anjara tamin'ireo mpisera sy mpikatroka reef mba hanampiana amin'ny fanadihadiana mahatsikaiky sy ny fiantraikany amin'ny vokatra. Anisan'izany ireto:
Ireo mpitsidika reefatra mitsidika tsy tapaka ny tranokala haran-dranomasina dia afaka manampy amin'ny famantatra ireo fiantraikany rehefa mitranga izy ireo, amin'ny famoronana 'rafitra fampandrenesana' ho an'ny mpitantana. Zava-dehibe indrindra izany satria mety hanimba ny fiantraikan'ny haran-dranomasina ny fanarahamason'ny fikarakarana satria ny lohataona dia manindry fotsiny mandritra ny fe-potoana iray ary ny alika maty dia atahorana haingana amin'ny alkaola.
Ny fampiasana ireo akora haran-dranomasina sy ireo mpandray anjara amin'ny fanombanana ny vokatra dia mety miteraka fanabeazana sarobidy, fanentanana ary fanentanana. Ohatra, ireo mpizahatany mpizahatany dia afaka manaitra ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fandaharanasa fanaraha-maso ampaham-batana izay mampiasa mpitaingina reefatra toy ny mpitaingin-tsakafo.
Ny fampidirana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpikatroka amin'ny fanaraha-maso ny asa dia afaka manohana ny hetsika natao hanohanana ny fanarenana ny vatohara. Ny hetsika toy izany dia ny famerana ny fidirana na ny asa atao any amin'ny faritra voakasika mafy amin'ny tranga.
Ny fifanakalozan-kevitry ny fifandraisana eo amin'ny mpitantana sy ny mpandray anjara dia mampitombo ny fahafahan'ny fitantanana ny vatohara amin'ny fomba mifanentana, mandroso ny tanjona amin'ny fanabeazana sy fitadiavana, ary afaka mampitombo ny fitantanana.
Ahoana no hananganana tambajotram-panaraha-maso fanaraha-maso?
Ny fametrahana tambajotram-panaraha-maso iraisam-pirenena dia mitaky: 1) manondro mpanara-maso, 2) famolavolana fomba fanadihadiana, 3) mpanara-maso fanatanjahantena, 4) mamorona rafitra iray na fizotry ny fampitana ireo angona avy amin'ireo mpanara-maso ireo manampahefana, sy 5) Manamafy ny fandraisana anjara.
Ny manampahefana dia afaka manapa-kevitra ny hanangana tambajotram-panaraha-maso iraisana na afaka manao ny programa fanaraha-maso mahazatra sy manara-maso, ka anisan'izany ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fokonolona sy ny biby fiompy rehefa misy ny fanadihadiana. Ireo mpanara-maso mandray anjara dia azo faritana amin'ny famaritana hoe iza ireo mpanjifa sy mpikatroka reefatra no mitsidika ny vatohara matetika ary mety ho afaka mandray anjara sy mahazo tombony.
Ny fomba fanadihadiana dia mila fanombatombana haingana izay mandinika ny fotoana azon'ny mpandray anjara an-tsoratra ary mety ho tafiditra amin'ny fahaiza-manaon'ny mpandray anjara izay mety hahazo mandritra ny fandaharam-pampianarana. Ny fandaharam-pampianarana dia azo atao mifanaraka amin'ny fahafaha-manatom-paritra ary mba ahafahan'ireo mpandray anjara hahazo ny fahaiza-manao tsara ary lasa manana fahaizana ampy amin'izany fahaiza-manao izany mba hahazoana fandaharana azo antoka.
Zava-dehibe ny mampifanaraka ny fampiasam-bola amin'ny fanarahamaso ny fandraisana anjara amin'ny loharano efa misy ary mba hahazoana ny filàna vaovao ilaina indrindra izay manohana mivantana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana. Ny fikarohana vao haingana dia manondro fa ny angona avy amin'ny fandaharanasa fanarahamaso ny mpandray anjara dia matetika adika amin'ny hetsika fitantanana mora sy haingana kokoa noho ny angona avy amin'ny rafitra fitsikilovana matihanina izay mitaky fanaraha-maso manam-pahaizana. ref
Ohatra avy amin'ny fandaharam-potoana fanaraha-maso fandriam-bary
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoZava-dehibe momba ny haran-dranomaso momba ny haran-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy mason'i Hawaii amin'ny fandaharan'asan'ny Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFlorida's BleachWatch Program
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Monitoring Manual ho an'ny Karaiba sy Western Atlanticmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ny faritra voaaro amin'ny haran-dranomasina: torolàlana azo ampiharina amin'ny fomba hanohanana ny fanaraha-maso mahomby amin'ny MPAmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ny fiovan'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny zavamananaina an-dranomasinamanokatra fisie PDF